जहाँ समस्या, त्यहाँ सजिलो १० लाख लगानी ६५ जना रोजगार
दिनेश गौतम काठमाडौं, १९ भदाै
जहाँ केही छैन । त्यहाँ अवसर धेरै हुन्छ ।’ नेपाल पनि त्यस्तै देश हो । यहाँ धेरै अवसरहरू छन् । तर, युवाको रोजाइमा भने नेपालभन्दा विदेश नै पर्ने गरेको छ ।
दैनिक २ हजारको हाराहारीमा युवा रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यसलाई रोक्नु अहिलेको चुनौती हो ।
इच्छाशक्ति, धैर्यता र इमानदार भएर काम गर्ने हो भने थोरै लगानीमा नेपालमै पनि लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ । ऋण काडेर विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन जानै पर्दैन । आफ्नै माटोमा काम, नाम र दाम कमाउन सकिन्छ ।
यसको उदाहरण हो ‘सजिलो मर्मत सेवा’ ।
ललितपुरको बालकुकारीस्थित सजिलो मर्मत सेवाको कार्यालयमा पुग्दा कोही युवा फोनमा ब्यस्त थिए । कोहीका औंला ल्यापटपमा सलबलाइरहेका थिए । अरुसँग बोल्ने फुर्सद उनीहरूलाई थिएन । आफ्ना ग्राहकलाई कसरी छिटो सेवा दिने र टेक्निसियनलाई परिचालन गर्ने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान थियो ।
‘मानिसको पहिलो आकर्षण नै उसको बाहिरी रूप हो ।’
ती युवाले लगाएको टिसर्टमा लेखिएको थियो, ‘जहाँ समस्या, त्यहाँ सजिलो’ । टिसर्टको क्याचलाइन नै सजिलो मर्मत सेवाको आकर्षण हो । जो कोहीलाई त्यही ‘क्याच’ लाइनले तान्छ ।
अनि समय निकाले कम्पनीका संस्थापक सुजित रेग्मीले । खोले सजिलो मर्मत सेवाको नालीबेली ।
यसरी जन्मियो ‘सजिलो मर्मत सेवा’
सजिलो मर्मत सेवाको संस्थापक हुन् सुजितसँगै कविस श्रेष्ठ र पुकार आचार्य । सुजितसहितको टोलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीए पढ्ने क्रममा फुरेको हो आइडिया । ‘कलेजमा प्रोजेक्ट वर्क बनाउने क्रममा जन्मिएको हो सजिलो मर्मत सेवा,’ सुजित भन्छन्, प्रोजेक्ट वर्कका लागि फुरेको आइडिया नै अहिले दैनिकी बनेको छ ।’
‘पोजेक्ट वर्क सकिएपछि त्यत्तिकै बसेका थियौं । २०१६ मा आइडिया स्टुडियोले आइडिया हन्टको आयोजना गरेको थियो । हामीले त्यही आइडियालाई आइडिया हन्टमा प्रस्तुत गर्यौं । अन्तत ः हाम्रो आइडिया विजेता भयो । हाम्रो आइडियालाई सबैले मन पराइदिनुभयो । अहिले खुशी छौं,’ सुजित भन्छन् ।
‘आइडिया हन्टमा विजेता भएपछि २०१७ बाट तीन जना मिलेर काम शुरू गर्यौं,’ सुजित भन्छन्, ‘अहिलेसम्म तीन जनाले १० लाख लगानी गरेका छौं ।’
काम त गर्ने तर चुनौती पनि उत्तिकै थियो । शुरूमा उनीहरूले एक सयभन्दा बढी घरमा गएर रिसर्च गरे । के–कस्ता समस्या छन् । त्यसको टिपोट गरे । रिसर्चका क्रममा नयाँभन्दा पुराना सामानको मर्मत गर्नुपर्ने धेरै देखियो । अनि उनीहरू लागे मर्मत गर्ने टेक्निसियन खोज्न ।
नेपालमा वर्षेनि ८ हजारभन्दा बढी टेक्निसियन सीटीईभीटीबाट उत्पादन हुन्छन् । तर, उनीहरू नेपालमा काम नपाएपछि विदेश जान बाध्य छन् । अहिले ६५ जना टेक्निसियनलाई सजिलो मर्मत सेवाले रोजगार दिएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा ६५ जना टेक्निसियन परिचालित छन् । उनीहरूलाई परिचालन गर्न १० जना कार्यालयबाट खटिएका छन् । यही कामबाट टेक्निसियनले १ देखि २ लाखसम्म कमाउने गरेका छन् ।
सेवा कसरी दिने ?
तपाईंको घरमा धारा, बिजुली, टीभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, कम्प्युटर, एसी, फर्निचरलगायतका सामग्री बिग्रिएको छ ? यदि बिग्रिएको छ भने अब आफैंले बोकेर मर्मत केन्द्रमा लैजानै पर्दैन ।
तपाईंकै घरमा मर्मत गर्ने टेक्निसियन आइपुग्छन् । मात्र तपाईंले फोन, सामाजिक सञ्जाल वा मेलबाट सजिलो मर्मत सेवालाई खबर गरे पुग्छ । अफिसको डिजाइनसमेत मर्मत सेवाले दिँदै आएको छ । जहाँ समस्या, त्यहाँ सजिलो लेखिएको टिसर्ट लगाएका टेक्निसियन दुई घण्टाभित्रमा ग्राहकको घरमै पुग्छन् । नयाँ सामग्रीमा ६ महिना र मर्मतमा एक महिनाको वारेन्टीसमेत रहेको छ ।
‘६ हजारभन्दा बढी घरमा सेवा दिएका छौं,’ सुजित भन्छन्, ५० भन्दा बढी कम्पनीमा वर्षभर मर्मत गर्ने सम्झौता भएको छ, दैनिक २० भन्दा बढी ठाउँबाट कामको फोन आउँछ ।’
अनुगमन कसरी हुन्छ ?
मर्मत सकिएपछि कम्पनीले ग्राहकलाई फोन गरेर काम राम्रो भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेको छ । ‘टेक्निसियनले ग्राहकसँग गरेको व्यवहारदेखि काम राम्रो भए नभएसम्मको अनुगमन गर्छौं,’ उनले थपे, अहिलेसम्म ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।’ सजिलो मर्मत सेवाको टिसर्ट लगाएर काम गर्दा टेक्निसियनलाई पनि ग्राहकले राम्रो व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ जडान वा पुरानो मर्मत गर्दा आएको रकमको ८० प्रतिशत टेक्निसियनलाई र १५ प्रतिशत सजिलो सेवालाई हुन्छ । ‘सजिलो मर्मत सेवा च्यानल हो,’ सुजित भन्छन्, काममा खटिने टेक्निसियन हुन्, ८० प्रतिशत उनीहरूलाई नै हुन्छ ।’ १५ दिन वा १ महिनामा हिसाब गर्ने गरेका छौं ।
आइडिया स्टुडियोका कारण सजिलो मर्मत सेवा यहाँसम्म आइपुगेको हो । आइडिया स्टुडियोकै कार्यालयमा सजिलो मर्मत सेवाको कार्यालय छ । अबको दुई वर्षभित्र उपत्यकाबाहिर पनि सेवा बिस्तार गर्ने तयारी छ । ‘कम्पनीलाई अझै ठूलो बनाउने हो,’ सुजितले भने, ‘दुई वर्षमा धेरै सिक्ने अवसर मिल्यो, अब उपत्यकाबाहिर पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०७६, २३:२२:००